OTU ESI EWEPU VOLCANO CASINO SITE NA KỌMPUTA NA WINDOWS 7 - WINDOWS - 2019
Ndị ọrụ ụfọdụ na-achọpụta na mgbe ha na-egwugharị na ihe nchọgharị ha na-emepekarị weebụsaịtị na mgbasa ozi Vulcan, ụlọ obibi na ihe nchọgharị weebụ agbanweela na isi akwụkwọ nke akụ a, yana mgbasa ozi na-amalite ịpụta ọbụna n'oge ọrụ nkịtị na PC na-enweghị Ịntanetị. Ihe ndị a nile bụ ihe ịrịba ama dị mma nke ọrịa kọmputa Vulcan Casino. Ka anyị chọpụta otú ị ga-esi merie nje a na kọmputa na-agba Windows 7.
Hụkwa: Otu esi ewepụ mgbasa ozi na kọmputa gị
Mgbochi nje virus "Vulcan Casino"
N'ihi ya, ọ dịghị mkpa ịchọta ụzọ isi wepụ "Vulcan Casino" site na kọmputa ahụ, naanị ịkwesịrị ka ị ghara ikpughe ya na ọrịa a. Ọ nwere ike ịbanye na PC gị mgbe ị gara na saịtị nke cha cha chaa (ma ọ bụ ihe ntanetị ndị ọzọ na-enyo enyo), ma ọ bụ mgbe ị wụnye ngwanrọ nke edere koodu ọjọọ. Ya mere, iji gbochie ọrịa, ị chọrọ:
Agala na saịtị ndị na-enyo enyo;
Adịnyela ngwa sitere na isi mmalite nke enweghị.
Iwepu site na iji ngwanrọ nke atọ
Ma ọ dị mwute ikwu na, ọbụna na-eji ụzọ dịgasị iche iche nke ịkpachara anya, ọ naghị adị anya mgbe niile iji chebe onwe ya. N'isiokwu a, anyị ga-ele anya ị ga - esi wepụ "Vulcan Casino" mgbe nje virus a na - ebute ọrịa. Enwere ike kewara ha abụọ: - iji ngwa ndị ọzọ na iji naanị ngwaọrụ. Ọzọ anyị na-ekwu banyere ha na nkọwa. Nke mbụ, anyị na-atụle usoro iji mmemme ndị ọzọ.
Usoro 1: AdwCleaner
Otu n'ime ụzọ kacha mma ị ga-esi wepụ nje virus mgbasa ozi, gụnyere Casino Vulcan, bụ iji usoro pụrụ iche emepụtara iji luso ụdị egwu a - AdwCleaner.
Gbaa AdwCleaner. Pịa na labeelu Iṅomi.
A ga-enyocha usoro maka nje virus na ndị ọzọ nwere ike ịmemme. Ntuziaka, nchekwa, ihe nchọgharị, usoro ndekọ ga-enyocha, heuristic analysis ga-rụrụ.
Mgbe njedebe nke iṅomi na nyochaa, AdwCleaner window ga-egosipụta nsonaazụ nke iṅomi. Edere ha na ndepụta nke ihe enyo, n'etiti nke, o yikarịrị ka enwere ihe na-ebute mgbasa ozi nke Vulkan casino na kọmputa gị. Ọ bụrụ, banyere ihe ọ bụla n'ime ihe egosiri, ị kwenyesiri ike na ha adịghị ize ndụ ma na ịchọrọ ha ịrụ ọrụ ụfọdụ, na nke a, debe ha. A ga-ahọrọ akara ngosi maka isi ihe ndị ọzọ niile. Pịa "Kọwaa".
Mpempe akwụkwọ ozi ga-apụta, nke ga-agwa gị banyere mkpa ịchekwa ma mechie ihe niile edere ederede na usoro mmemme. Ma ọ bụghị ya, ha ga-agwụ ike, akwụkwọ a na-azoputaghi ga-efu. Dezue ọrụ niile na-arụsi ọrụ ike ma pịa bọtịnụ na windo ozi "OK".
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-emecha mmemme ndị a na-emeghị emecha, AdwCleaner ga-ewepụ ihe ndị e depụtara na listi ahụ mgbe ị nyochachara.
Mgbe nhichapụ ahụ zuru, a na-arụ ọrụ igbe, nke ga-agwa gị na ọ dị mkpa ịmalitegharịa PC maka nhichacha ikpeazụ. Pịa Megharia Ugbu a.
Kọmputa ahụ ga-amalitegharịa, mgbe ọ gbanyechara, a ga-ehichapụ ihe niile achọghị, gụnyere Casino Vulcan. Ọ ga-amalite na-akpaghị aka. Notepad, nke edere ederede ga-enwe akụkọ banyere ihichapu kọmputa ahụ site n'enyemaka AdwCleaner.
Usoro 2: Malwarebytes Anti-Malware
Ihe omume ọzọ, site na enyemaka nke ị nwere ike idozi nsogbu nke iwepụ software sitere na Casino Vulcan, bụ Malwarebytes Anti-Malware.
Mwepụta Malwarebytes Anti-Malware. Na windo nke usoro ihe omume ahụ pịa bọtịnụ ahụ. "Gbaa bọtịnụ".
A ga-enyocha usoro maka egwu dị iche iche, gụnyere nje virus "Casino Vulcan". Ebe nchekwa usoro, mmalite ihe, ndekọ usoro, usoro faịlụ, na ịchọta ihe ga-enyocha.
Mgbe nyocha ahụ zuru ezu, a ga-egosipụta ya. Dị ka ọ dị na mbụ, kpochie igbe dị n'ihu ihe ndị ahụ ị maara n'aka ha. Pịa "Bugharịa ihe ndị a họọrọ iji kpochapụ".
A ga-eme usoro nke ịkpụgharị ihe ndị a na-ahụ anya na mpaghara dị iche iche nke usoro ahụ (kwarantaini), ebe ha agakwaghị etinye ihe ize ndụ ọ bụla.
Mgbe usoro ahụ gasịchara, windo ga-apụta, nke ga-agwa gị na emetụla ihe omume ọjọọ niile na klasin. Ugbu a, mgbasa ozi iwe iwe nke cha cha "Volcano" na kọmputa gị agaghịzi egosipụta.
Ihe Ọmụmụ: Ihichapụ Valycan Casino Ads Iji Malwarebytes AntiMalware
Nhicha na nhicha
Ekwesiri iburu n'uche na nhichapu ntuziaka nke ntaneti sitere na nje mgbasa ozi "Casino Vulcan" karia iji mmemme puru iche. A ghaghị ime ya n'ọtụtụ oge, iwepu koodu ọjọọ na ihe nchọgharị, ihichapụ faịlụ nje ahụ n'onwe ya, ma ọ bụrụ na ọ dị na usoro, nakwa, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ihichapụ ndekọ ahụ na ihichapụ ọrụ ndị kwekọrọ na ya. "Nchọta atụmatụ".
Nkeji 1: nhichapu nyocha
Nke mbụ, ọ dị mkpa iji tọgharịa ntọala ihe nchọgharị na ndabara ndabara.
Nke mbụ, ka anyị hụ ihe ụdị algorithm chọrọ ka a rụọ na nchọgharị weebụ Google Chrome.
Pịa na ihe na-emepe menu na Google Chrome (ihe atọ nwere oghere). Na menu na-emepe, pịa "Ntọala".
Ntọala ntọala ga-emeghe. Ị ga-agbada ala ya ma pịa na mmewere. "Mgbakwunye".
A ga-emepe ọtụtụ ntọala dị elu. Pịgharịa gaa na windo wee pịa labeelu ahụ. "Tọgharia".
Ọzọ, otu igbe na-emepe ebe ịkwesịrị iji gosi nkwenye gị site na ịpị "Tọgharia".
A ga-edozi ntọala na ụkpụrụ ndabara, ya bụ:
Adreesị ebe obibi;
Nweta ngwa ngwa.
A ga - ewepu taabụ ọ bụla, a ga - ewepụkwa ndọtị ya. Tụkwasị na nke ahụ, a ga-ekpochapụ cache na kuki ehichapụ, mana okwuntughe na ibe edokọbara ga-anọgide na-emebi.
Ugbu a tụlee usoro maka resetting ndabara ntọala nke nchọgharị Mozilla Firefox.
Pịa na akara ngosi dị n'ụdị obere nchịkọta atọ dị n'usoro edoziri otu onye na ibe ya. Ọ bụ otu ihe ahụ gbasara Chrome, nke dị n'akụkụ aka nri nke toolbar. Na menu na-emepe, pịa "Enyemaka".
Nchịkọta nhọrọ ga-apụta ebe ịkwesịrị ịkwaga n'ọnọdụ ahụ. "Ozi Ngwọta Nsogbu".
Akwụkwọ ahụ ga-emeghe na taabụ ọhụrụ. Chọọ maka ngọngọ na aka nri ya. Ntọala Firefox. Pịa ya na bọtịnụ ahụ "Kọwaa Firefox ...".
Igbe ga-emeghe, ebe ịdọ aka ná ntị ga-egosi na, n'ihi ọrụ gị, a ga-arụnye ihe mwube ihe nchọgharị ndị a, a ga-ewepụkwa ndọtị niile. Pịa "Kọwaa Firefox".
A kpochapụrụ ihe nchọgharị ahụ, na ntọala ya ga-abanye na ntọala ndabara.
Ugbu a, ka anyị kwuo banyere otu esi edozi ntọala na Opera nchọgharị. Nke a na-esiri m ike karịa karịa ihe nchọgharị weebụ gara aga. Nke a bụ eziokwu na ọ dịghị otu bọtịnụ nrụpụta, ma na ị ga-arụgharịrị iche iche isi na ihichapụ ihe ndọtị.
Pịa "NchNhr" ma họrọ otu ihe "Ntọala".
N'akụkụ aka ekpe nke windo na-egosi, gaa na ngalaba ahụ "Nchebe".
Na otu nke parameters "Eziokwu" pịa "Kọwaa nleta akụkọ nleta".
Na windo meghere site na ndepụta ndọpụta, họrọ oge site na "Mmalite". Lelee igbe dị n'akụkụ mpaghara niile. Echela naanị otu ihe "Okwuntughe". Wee pịa "Kọwaa nleta akụkọ nleta".
A ga-eme usoro nhicha.
Ma nke ahụ abụghị ihe niile. Anyị kwesịrị iji gbanyụọ ihe niile a gbakwunyere, ebe ọ bụ na, enwere ike, enwere mmemme nke na-akwalite mkpọsa nke mgbasa ozi Vulkan. Pịa ọzọ "NchNhr" ma nyochaa site na ntinye "Ọpụpụ". Na ndepụta ndị ọzọ, pịa ihe ahụ na otu aha ahụ kpọmkwem.
N'ime windo mepere emepe, a ga-ewepụ ndọtị ahụ n'ụdị mgbochi. N'elu aka nri nke obosara nke obula gabu obe. Pịa ya iji wepu ihe tinyekwuru.
Ọzọ, igbe na-emepe, ebe ị ga-achọ ikwenye omume gị site na ịpị "OK".
A ghaghị ime usoro yiri ya na njikwa niile na ihe nchọgharị ahụ. Mana ọ bụrụ na ịchọrọ na ọ bụ mgbakwunye kpọmkwem nke bụ isi iyi mgbasa ozi viral, mgbe ahụ, ịnwere ike ịkwụsị ya naanị maka iwepu ya.
Ihe omumu: Otu esi tugharia ntọala n'ime Opera nchọgharị
Ugbu a, anyị ga-eleba anya iji setịpụ ntọala n'ime ihe nchọgharị ahụ dị na PC ọ bụla na Windows 7, ebe ọ na-adọta n'ime OS - Internet Explorer.
Pịa akara ngosi gia na toolbar. Na menu na-emepe, họrọ "Njirimara Nchọgharị".
Njirimara windo ihe nchọgharị mepee. Gaa na ngalaba "Di elu".
Na shea gosipụtara, pịa "Tọgharia ...".
A windo meghere nke ịkwesiri ikwenye omume gị site na ịpị "Tọgharia"ma buru ụzọ nyochaa igbe dị n'akụkụ ọnụọgụ "Hichapụ ntọala onwe onye".
A ga-emegharịrị ala na ndabara ndabara.
Enweghị ike ịkọwapụta omume maka ịtọgharị oge n'ime ihe nchọgharị ndị na-ewu ewu n'isiokwu a, mana ebumnuche nke iji aka dozie nsogbu a yiri ụdị ihe nchọgharị weebụ niile.
Ibido mmeghari abụghị ihe niile. Ịkwesịrị ịlele akara ndị ị na-eji iji malite ihe nchọgharị ahụ: ma adreesị aha saịtị nke Vulcan casino saịtị ahụ, ebe ọ bụ na ọ bụ ọnọdụ nkịtị mgbe nje a na-ebute ya.
Iji mee nke a, pịa aka nri (PKM) na ụzọ ụzọ nchọgharị na desktọọpụ na nhọrọ na -eme nhọrọ "Njirimara".
Obere ụzọ njirimara windo ga-emepe. Lezienụ anya n'ọhịa "Ihe". Ọ bụrụ na ị denyeghị ntọala ọ bụla n'onwe ya, mgbe ahụ mgbe mgbatị nke EXE na njedebe mmechi ahụ ekwesịghị inwe data ọ bụla n'ime ya. Ọ bụrụ na mgbe ederede a kapịrị ọnụ, e debere ụfọdụ data, karịsịa njikọ nke saịtị cha cha "Ugwu mgbawa", nke a pụtara na mgbanwe nke ihe ngosi nke akara ngosi ahụ mere site na koodu ọjọọ.
Hichapụ data niile dị n'ọhịa "Ihe" gaa n'aka nri nke ruturu mgbe ọpụpụ exe. Pịa "Tinye" ma "OK".
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, a ga-eme usoro yiri ya na nchịkọta nke ihe nchọgharị niile na kọmputa.
Nzọụkwụ 3: Hichapụ faịlụ ahụ a ga-eme
Ọ bụrụ na a gbanwere mgbanwe Vulcan Casino naanị na ihe nchọgharị, mgbe ahụ, omume dị ọcha a dị n'elu ga-ezu iji wepụ mgbasa ozi na-adọrọ adọrọ. Ma ọtụtụ ihe anaghị adị mfe. Ọrịa ahụ na-ede faịlụ ya n'ime usoro ahụ, na-agbanwe mgbanwe Onye nlekọta ọrụ ma ọ bụ na ndekọ. Na-emekarị ya ọnụ. Nke mbụ, chọpụta otú ị ga-esi wepu faịlụ nke nje virus.
Ọzọ na otu "Mmemme" pịa "Wepu Mmemme".
Ngwaọrụ ọkọlọtọ ga-emeghe maka iwepu ngwa na Windows 7. Gbalịa ịchọta ihe dị na ndepụta nke ngwa, na aha nke okwu ndị bụ "cha cha cha" ma ọ bụ "ugwu mgbawa", ma na Cyrillic na Latịn. Ọ bụrụ na ịchọtaghị ụdị ihe dị otú ahụ, mana ịnwere nsogbu na mgbasa ozi ọ bụghị ogologo oge gara aga, wee pịa aha ubi "Arụnyere".
N'ụzọ dị otú a, ị ga-eme ihe mmemme ikpeazụ awụnyere na-egosi n'elu ndepụta ahụ. Jiri nlezianya nyochaa ha maka ngwa ọ bụla ị wụnyeghị onwe gị. Karịsịa leba anya na mmemme na-enweghị onye nkwusa. Ọ bụrụ na ịchọta ihe dị otú ahụ na-enyo enyo, mgbe ahụ ọ ghaghị idozi ya. Họrọ ihe ma pịa "Hichapụ" na panel.
Mgbe nke ahụ gasịrị, mee usoro niile dị mkpa maka iwepu, dị ka ndụmọdụ ndị a ga-egosipụta na windo ahụ.
Nkeji 4: Ihichapu Task
Ma ọtụtụ mgbe, nje virus "Casino Vulcan" na-edekwa oge ọrụ nke nbudata faịlụ nwere ike iwepụta ma ọ bụ ndọtị kwekọrọ na ọchụchọ. Ya mere, ihicha ihe nchọgharị weebụ ma wepu ngwa ahụ ga-edozi nsogbu ahụ nwa oge. Kwesịrị ịlele "Nchọta atụmatụ" maka ọrụ ịchọrọ.
Gaa "Ogwe njikwa" site na bọtịnụ ahụ "Malite" dị ka akọwapụtara n'elu. Ma ugbu a, pịa "System na Nchebe".
Ọzọ, meghee "Nchịkwa".
Na ndepụta nke gosipụtara, chọọ "Nchọta atụmatụ".
A pụkwara ịrụ ọrụ ya site na iji windo Gbaa ọsọ. Kpọọ Nweta + R ma tie aka na:
"Nchọta atụmatụ" na-agba ọsọ. Na mpịakọta aka ekpe nke windo dị ugbu a, pịa "Ụlọ Akwụkwọ Ihe Ntuzi ...".
Ndepụta ihe niile aga-eme na usoro a ga-egosipụta na akụkụ nke elu nke oghere dị na windo ahụ. Ị nwere ike ịmara onwe gị na isi ihe dị mkpa mgbe ị na-ahọrọ ọrụ na mpaghara ala nke otu ogwe. Lezienụ anya na ihe ndị na-enyo enyo na-eme atụmatụ iji bulite faịlụ ọ bụla na Ịntanetị ma ọ bụ gaa na ibe weebụ.
Iji kpochapụ ọrụ enyo, pịa ya. PKM ma họrọ site na menu "Hichapụ".
Igbe ga-emeghe ebe ịkwesiri igosi na ekwesiri ime ihe ị chọrọ site n'ịpị "Ee".
A ga-ewepụ ọrụ ahụ na-enyo enyo ozugbo.
Nzọụkwụ 5: Nhicha aha
Ma ọrụ kachasị ike iji kpochapụ mgbasa ozi iwe, ma ọ bụrụ na "Casino Vulcan" dị na ndekọ aha usoro. Nke bụ eziokwu bụ na n'ime ọnọdụ dị otú ahụ, ọ bụghị naanị na o siri ike ịchọta nkebi ebe ọnye ọjọọ ahụ dị, ma ọ dị mkpa iburu n'uche na nhichapụ nke ihe ndekọ nwere ike ịkpata ọdachi ma ọ bụ ọbụna mmezigharị usoro zuru ezu. Ya mere, n'amaghi inweta ihe ọmụma na nkà dị mkpa, ọ ka mma ịghara ime ntuziaka ntuziaka na saịtị a. Omume niile ị na-eme na ihe ize ndụ gị. N'ọnọdụ ọ bụla, tupu ịmalite ọrụ, lezie anya ịmepụta ntọala OS ma ọ bụ ndabere ya.
Tinye Nweta + R. Bụrụ na:
Ga-emeghe Editor Editor.
Site na ịgagharị site na akwụkwọ ndekọ dị na mpịakọta aka ekpe nke windo ahụ, chọta ntinye akwụkwọ ntinye enyo nwere ọnụọgụ nke nje virus ahụ. Pịa na ngalaba a. PKM ma họrọ na menu "Hichapụ".
Igbe na-egosi ebe ịkwesiri ikwenye nhichapụ site na ịpị "Ee".
Mgbe nke ahụ gasịrị, nso Editor Editorsite na ịpị akara ngosi nso nso.
Ịkwesịrị ịmegharia ngwaọrụ ahụ maka mgbanwe ndị ị ga-eme. Pịa "Malite". Wee pịa triangle aka nri nke "Nkwụsị". Na menu, họrọ Rụgharịa.
Mgbe ịmalitegharịrị PC, igodo ndekọ ahụ nwere njedebe nke obi ga-ewepụ kpamkpam.
A pụrụ iwepu nje "Casino Volcano" ma ọ bụrụ na enyemaka nke ngwanrọ pụrụ iche ma ọ bụ iji aka na-eji ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ị bụghị onye ọrụ dị elu, mgbe ahụ anyị na-akwado iji mbido abụọ mbụ akọwapụtara na ntụziaka a. Na pinki, ị nwere ike iji aka wepụ ihe nchọgharị, wepụ ihe omume enyo ma wepu ihe omume dị ize ndụ na "Nhazi". Ma iji mee mgbanwe ntuziaka na ndekọ aha na-enweghị ihe ọmụma na ahụmịhe dị mkpa onye ọrụ nwere ike adịghị akwado.